Ary mba hampahiratina ny mason’ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin’ ny fiantsoany sy izay haren’ny voninahitry ny lovany eo amin’ny olona masina. Efes. 1:18
Nitalaho tamin'Andriamanitra ny Apôstôly Paoly hoe: "Mba homen'Andriamanitr'i Jesôsy Kristy Tompontsika, Rain'ny voninahitra, ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana Azy tsara, ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fihoaran'ny halehiben'ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany" - Efes. 1:17-19. Fa tsy maintsy ampifanarahana amin'ny toetry ny fahamarinana katsahina aloha ny saina. Tsy maintsy hampahiratina ny mason'ny saina, ary tsy maintsy mifandray amin'Andriamanitra izay fahamarinan'ny fo sy ny saina.
Izay mibanjina an'i Jesôsy amin'ny masom-pinoana dia tsy hahita voninahitra eo amin'ny tenany; fa ny voninahitry ny Mpanavotra no manazava ny sainy sy ny fony. Tanteraka ny fanavotana avy amin'ny rany, ary famelana ny ota no manetsika ny fony hankasitraka. Rehefa nohamarinin'i Kristy ny mpandray ny fahamarinana, dia voatery hanolo-tena tanteraka amin'Andriamanitra izy, ary tafiditra ao amin'ny sekolin'i Kristy ka mianatra Aminy, Iay mora fanahy sy tsy miavona am-po. Manenika ny fony ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy izy: Fitiavana manao ahoana loatra re! Famindrampo manao ahoana loatra re! Rehefa mifikitra amin'ireo teny fikasana sarobidin'ny finoana izy dia lasa mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Rehefa foanany ao am-pony ny izaho, dia mikoriana ao anaty ny ranon'ny fiainana, ary mamirapiratra ny voninahitry ny Tompo. Rehefa mijery an'i Jesôsy mandrakaiva izy, dia tafaray amin'Andriamanitra ny olona. Voaova hanahaka Azy ny mpino.
"Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo, dia ny Fanahy" - 2 Kôr. 3:18. Hovana ho tahaka ny an'Andriamanitra ny toetran'ny olona. Ny masom-panahy no mahita izany voninahitra izany. Miafina, mifono ho zavamiafina izany raha tsy ny Fanahy Masina no manome io fahaiza-manavaka io. RH,18 Febroary1896.